1. Kukholakala ukuthi abantu abaningi kungenzeka babe nama-akhawunti amadala e-Instagram abangasasebenzisi wona. Kepha ayivaleki futhi ishiye i-akhawunti yakho yodwa, ngakho-ke imininingwane yakho nezithombe zakho zisazoxhunywa ku-inthanethi. Ngakho-ke, ukuze uvimbele abanye ekutholeni imininingwane nezithombe. Namuhla sizokwethula izinyathelo zokuthi ungasusa kanjani i-akhawunti ye-Instagram.Ngokususa i-akhawunti ye-Instagram, kungenziwa ngezindlela ezimbili: ukucisha i-akhawunti ye-Instagram okwesikhashana bese uyisusa unomphela. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini okudingeka uyenze, ake sibheke.
2. Ungayenza kanjani i-akhawunti ye-Instagram ingasebenzi okwesikhashana
3. Ngokuvalwa kwesikhashana kwe-akhawunti ye-Instagram, kuzokwenza umnikazi we-akhawunti, abalandeli nomphakathi jikelele. Ayikwazi ukubona ama-akhawunti noma ukwenza imisebenzi ku-akhawunti evaliwe. Kodwa-ke, inzuzo yalolu hlobo lokuvalwa kwe-akhawunti ukuthi ungaphinda uqalise ukusebenza kamuva. Izinyathelo zokuvula i-akhawunti yakho ye-Instagram okwesikhashana zingokulandelayo: Okokuqala, iya ku- Ngokuvula i-akhawunti yakho ye-Instagram, kufanele ungene ngemvume ngesiphequluli sewebhusayithi kuphela. Ayikwazi ukuvala ngohlelo lokusebenza lwe-Instagram
4. Lapho ungene ngemvume ohlelweni Cindezela ukufaka ikhasi lephrofayili yakho.
5. Bese uchofoza inkinobho yokuhlela iphrofayili.
6. Kamuva lapho ufaka ikhasi lokuhlela iphrofayili Ungacindezela inkinobho. "Yenza i-akhawunti yami isebenze okwesikhashana"
7. Ngemuva kwalokho uzocelwa ukuthi ukhethe isizathu sokuvala i-akhawunti yakho okwesikhashana bese ufaka iphasiwedi ye-akhawunti yakho ye-Instagram Lapho usuqede konke, cindezela inkinobho. "Ukwenza i-akhawunti yomsebenzisi ingasebenzi okwesikhashana" kuyenziwa.
8. Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Instagram unomphela
9. Ukususwa unomphela kwe-akhawunti yakho ye-Instagram ukususa i-akhawunti yakho unomphela nayo yonke idatha yakho. Futhi ayikwazi ukubuyiselwa futhi Izinyathelo zokususa unomphela i-akhawunti ye-Instagram zimi kanje - Isinyathelo sokuqala oya ku-https: //www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ ngokungena ku-akhawunti ye-Instagram ngesiphequluli sewebhusayithi kuphela - Ngemuva kwalokho ucindezela inkinobho. "Susa .. (igama le-akhawunti yakho) .." kwenziwa. Kodwa-ke, uma ucindezela inkinobho yokususa i-akhawunti, i-akhawunti yakho ngeke isuswe ngokushesha. Kepha kuzofihlwa Futhi izosuswa ngosuku nesikhathi esibekiwe Uma ingeyakamuva, i-akhawunti yakho izosuswa. Ungabuya futhi ukhansele ukususwa kwe-akhawunti. Kepha ngemuva kokuba usuku nesikhathi esichaziwe kudlulile, i-akhawunti yakho izosuswa unomphela futhi ayikwazi ukubuyiselwa.